बढी ब्याजको आशामा ठगिए सर्वसाधारण - अपराध - साप्ताहिक
बढी ब्याजको आशामा ठगिए सर्वसाधारण
मोटो रकम ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी देवकुमारी भुजेल (थापा) तथा उनका पति लक्ष्यबहादुर थापालाई पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार, कास्की पठाइएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रमानाथ पौड्यालको इजलासले उनीहरूलाई मुलुकी ऐन ११८ को देहाय २ अनुसार मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो । यसैगरी अर्का प्रतिवादी दण्डपाणि सुवेदीलाई मुलुकी ऐन ठगीको महलको ७ नं. को कसुरमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम लिई तारेखमा छाडिएको छ ।
कसरी बिग्रियो व्यवहार
स्याङ्जा जिल्ला फेदिखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ भाटखोला घर भएकी देवकुमारी भुजेल (थापा) वि.सं. २०५१ मा पढ्न भनेर पोखरा आइन् । त्यतिबेला उनले नेपाल औषधी व्यवसायी संघमा सामान्य कर्मचारीका रूपमा जागिर गरिन् । श्रीमान् भारतीय सेनामा जागिरे भएकाले देवकुमारी आर्थिक कारोबारसमेत आफैं गर्थिन् । उनले २०६० सालतिरै आफ्नै पहलमा तत्कालीन पोखरा
उपमहानगरपालिका–८, एयरपोर्टपछाडि ६ आना जग्गा किनिन् । २०६८ मा उक्त जग्गासँग पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–१४, चाउथेस्थित एकतले पक्की घर सट्टापट्टा गरिन् । त्यतिबेला उनले ३० लाख रुपैयाँ थप्नुपर्ने भयो । घरजग्गा फेवा फाइनान्स, चिप्लेढुङगामा धितो राखेर तथा केही रकम बाहिर ऋण खोजेर उनले उक्त व्यवहार टारिन् । भुजेलले पुन: केही रकम ऋण लिएर घरको तला थपिन् । देवकुमारीमाथि आर्थिक भार थपिँदै गयो, जसलाई सल्टाउन उनले विभिन्न व्यक्तिसँग चर्को ब्याजमा रकम लिई कारोबार गर्न थालिन् । देवकुमारी जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने, घर बनाउने–बेच्ने मात्र नभएर सेयरको कारोबारसमेत गर्थिन् । यसरी कारोबार गर्दा उनले पैसाको थप जोहो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
उनले बढी ब्याज प्रदान गर्ने प्रलोभनमा पारी विभिन्न व्यक्तिबाट रकम चलाउन थालिन् ।
मिजासिलो स्वभाव, बोलीले कन्भिन्स गर्न सक्ने खुबी मात्र नभएर लिएको रकमको ब्याजसमेत समयमै बुझाउने भएकाले उनीप्रति विश्वास गर्नेहरू बढ्दै गए, तर उनको कारोबार भित्रभित्रै बिग्रदै थियो । ब्याज दिँदै उनले ऋण दिनेहरूलाई खुसी बनाइरहेकी थिइन् । बिस्तारै उनलाई ब्याजको रकम समेत जोहो गर्न मुस्किल पर्न थाल्यो । कारोबार मिलाउनकै लागि उनले आफू बस्दै आएको घर १ करोड ७५ लाख मूल्यमा नारायण लम्साललाई बिक्री गरिन् अनि आफू त्यही घरमा डेरा गरी बसिन् । यद्यपि घर बेच्दा पनि व्यवहार सल्टिएन । उनलाई व्यवहारले थिच्दै गयो । ब्याज मात्र दिएर भए पनि साहूहरूको मन बुझाउने अवस्था नभएपछि उनी परिवारसहित पोखराबाट फरार भइन् । उनले आफ्नो घर किन्ने लम्सालसँग समेत १० लाख रुपैयाँ फुत्काइन् ।
देवकुमारी पोखराबाट भागेपछि धेरैले विदेश पुगेको अनुमान गरेका थिए । पीडितहरूलाई देवी पक्राउ पर्लिन् भन्ने आशासम्म थिएन, तर उनले प्रयोग गरेको पुरानो फोन कलका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की देवकुमारीलाई पक्राउ गर्न सफल भयो । काठमाडौं प्रहरीको सहयोगमा कास्की प्रहरी उनीसम्म पुग्यो । भुजेलले पोखराको केही दिनपछि महेन्द्रपुलका औषधी व्यवसायी दण्डपाणि सुवेदीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेकी थिइन् । सुवेदीसँगको त्यही सम्पर्कका आधारमा योजना बनाएर कास्की प्रहरी उनी भएको ठाउँसम्म पुग्न सफल भयो । देवकुमारी काठमाडौंको न्युरोड नजिकै जैसीदेवलमा मूल सकडबाट भित्र सानो गल्लीस्थित पुरानो घरको दुई कोठा भाडा लिई पहिचान लुकाएर बसेकी थिइन् । त्यहाँ उनका श्रीमान् लक्ष्मण, दुई छोरी तथा एक छोरासँगै थिए ।
देवकुमारीबाट ठगिएकाहरू ?
देवकुमारीबाट ठगीएको भन्दै ३६ जनाले जाहेरी दिएका छन्, जसअनुसार बबी श्रेष्ठको ९० लाख, प्रमिला रानाभाटको २ करोड, शान्तकुमारी घलेको ३३ लाख, विद्या गुरुङको ४१ लाख ५० हजार, हेमबहादुर गुरुङको ७४ लाख, बिमला शर्मा सिग्देलको ७० लाख, गेसबहादुर रानाको १० लाख, बिलबहादुर भुजेलको ५ लाख, विष्णुकुमारी क्षेत्रीको ६२ लाख, लक्ष्मी देवी गुरुङको १७ लाख, देवबहादुर रानाको २४ लाख ५७ हजार, मीना थापाको १ करोड, सुनमाया श्रेष्ठको १ करोड १७ लाख, सृजना पराजुलीको ८९ लाख, राधिका सैंजूको ४४ लाख ५० हजार, अंकबहादुर क्षेत्रीको १५ लाख, रीतु ताम्राकारको ५६ लाख, ललिता थापाको ८ लाख, रोशनी क्षेत्रीको ६ लाख, मिठु भनिने लालकुमारी ढकालको ७ लाख, मिलन श्रेष्ठको २ लाख, अमृत रानाको ६ लाख २० हजार, नील कुमारी केसीको २५ लाख ५० हजार, टकजंग क्षेत्रीको १ करोड १ लाख ६० हजार, मिलन केसीको ५ लाख, बिमलाकुमारी शर्मा पराजुलीको ८२ लाख, गायत्री अर्यालको २७ लाख, सुशीला सिग्देलको ९ लाख ८५ हजार, पूर्णबहादुर थापाको तेह्र लाख, मधुपा झाक्रीको १५ लाख, जीवन लामाको ८ लाख, रीता पौडेलको ६० लाख, देवेन्द्र धितालको ३२ लाख, शोभा घलेको १८ लाख ५० हजार, वालमाया पुनको ५१ लाख ७० हजार, बिना दुराको २३ लाख ५० हजार भएको उनीहरूको दाबी छ । देवकुमारीले रकम लिएका मानिसहरूको संख्या अझ बढ्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । पीडितहरूले बढी ब्याज पाइने आशामा देवकुमारीमाथि विश्वास गरी मोटो रकम बुझाएका थिए ।
समय र धनमा कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ ?
साहित्यमा किन प्रेम बढी लेखिन्छ ?
अपराधमा युवा माघ १, २०७५
बोल्ड र स्मार्ट लुकमा यसरी फसाउँछन् लेडी पकेटमार पुस २३, २०७५
श्रेयाको हत्या गर्ने कुसुमलार्ई जीवित रहेसम्म कैद पुस १६, २०७५
चार वर्षमा १४ हजार लागूऔषध कारोबारी पक्राउ पुस ५, २०७५
लागूऔषधको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बर्दिया पुस ४, २०७५